DAAWO:Banaan bax maalintii labaad ka socda Garowe & Shacabka oo Cadaaladd dalbanaya
July 29, 2020 Mahad Jama 2
GAROWE(P-TIMES)- Banaan baxani oo ay dhigeen dad weyne ka cadhaysa fal maalintii shalay ahayd ay ku dhaawaceen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska gobolka Nugaal haween dan yar ah oo ka cabanayey lacago iyo shatiyo ganacsi oo la dul dhigay ayaa ka dhacay barxada magaalada Garowe.
Banaan baxayaasha oo ku dhawaaqayey erayo ay kamid yihiin cadaaladd baan doonaynaa ayaa cabashadooda la xidhiidhaa sixir barar iyo cashuuro xad dhaaf ah oo la dul dhigay ganacsatada dan yarta ah ee miislayda Garowe.
Wasaaradda Ganacsiga Puntland ayey ku eedeeyeen in ay qayb ka tahay falkii ka dhacay barxada Garowe maalintii shalay ahayd maadaama ay rasaas ku fureen haweenka ka ganacsada suuq New Dayax ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Nugaal.
Dadkii shalay ku dhaawacmay falkaasi oo ahaa saddex haween ah ayaa mid u geeriyootay dhaawicii soo gaadhay, waxaana maalintii labaad banaan baxaya ganacsatada dan yarta ah iyo shacabka Garowe qaarkood.
Goobaha banaan baxu ka socdo oo ah barxada ayaa waxaa ku sugan ciidamo badan, kuwaas oo iyagu kala caydhinaya dadka banaan baxaya.
Dhacdadii maantii shalay ahayd ka dhacday barxada Garowe ayaa waxaan weli ka hadlin maamulka gobolka iyo laamaha amaanka marka laga reebi agaasimaha Wasaaradda Ganacsiga oo beeniyey in shacabkii banaan baxayey ay u adeegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda.
Oo saw kii DENI amarka ku bixiyay in dadka la laayo iyada oo aan maxkamad la soo taagin (shoot to kill)!!!!!
Aniga aragtidayda, Deni amarkan TACBAANKA ah laba arrimood buu ku qarinayaa oo uu uga dan leeyahay. Waa ta koode, waxa uu isleeyahay ku soo jiido bulshada Gaalkacyo, oo indhawaydba hal doorkooda lagu hor gawracayey. Waa tan labaade, in uu ugu jawaabayo Dhoobo, isaga oo qiil ugu samaynaya dhalinyaradii uu habeenka madoow ku hor gawracay xarunta baarlamaanka Garoowe.
Deni ma ogyahay waxa ka dhalan kara amarka uu bixiyay mise wuu maqlay uun? Bal askari qaad cunaya, oo khamri cabaya, oo xashiishad cabaya, oo aqoon ka arradan, oo ku indha dilaacsaday meel aan kala danbayni jirin, oo la yiri fasax baad u tahay ciddad disho, maxaad u malaynaysaan?
Waar Deniyoow haddaad ku guul darraysatay hoggaanka (waabad ku guul darraysataye) bulshada indhaheeda ka hor leexo adoon dhibaato intaa kabadan u gaysan. Waxa aadna tahay GACAN KU DHIIGLE weli u hammuun qaba in uu laayo cidkasta oo ka ra’yi duwan. Kiis iska waalnimo ma soconayso, raggaad baarlamaanka ku horlaysayna waa dhito kuu taal. Waana kaa shishaynaa oo kaa sokaynaa.
Waa jareer iyo eelaay. Shabaabnimo ma hadde ayey keeney in Fawda iyo was ka dhigaan Puntland. Waa in tilaabo cad laga qaado oo laga eryaa Puntland.